Ama-Proteas women alungele inselelo enkulu ne-England
The Momentum Proteas are on the hunt for their first ever series win in England.
Ukapteni wama-Momentum Proteas, u-Dané van Niekerk uthi iqembu lakhe likulungele lokhu abakwazi njenge-tour enzima bedlala ne-England ekhaya labo.
Ekhuluma ngobusuku ngaphambi kwe-Women’s One-Day International yokuqala e-Worcester, ukapteni we-South Africa uthe unelisekile ngamalungiselelo eqembu lakhe futhi ukholwa ukuthi bakulungele ukukhombisa ukukhula kwabo selokhu lamaqembu ahlangana kwi-2017 ICC Women’s World Cup semi-final lapho i-England yanqoba khona futhi bagcina sebengompetha.
“Kusasa sidlala neqembu elilodwa lalawa aphambili emhlabeni, iqembu eliletha inselelo futhi elinamathalente, kodwa ngokusho lokho, nathi sineqembu elinamathalente ngakho kuzohlanganwa kahle,” esho ephawula.
“Badlala ikhilikithi enhle kuyona yonke indebe yomhlaba futhi bakusebenzisa ngokugcwele ukuthi badlalela ekhaya. Igoli esizibekele lona ukuthi sihlule i-England ekhaya, angeke kubelula kodwa sifikele lokho lapha.”
“Ngicabanga ukuthi iqembu elisebenza ngokushesha futhi elenza kahle yilona elizonqoba. Ngethemba, nezinhlelo esizenzile, kuzoba ithina.”
Ama-Proteas, afike e-England ngoMsombuluko, ebesebenza kanzima ejwayela isimo esihlukile sase-England. Badlala umdlalo wokuziqeqesha ne-England Women’s Academy lapho bahlulwa khona ngama-wicket amane ekugcineni, kodwa u-Van Niekerk ukholwa ukuthi umdlalo wahamba indlela ende ekukhombiseni iqembu izindawo ezidinga ukubhekwa futhi uyathemba ukuthi sebejwayele ngendlela edingekile.
“Okokuqala esikunakile ukuthi kusabanda nokho kuyihlobo,” esho echaza.
“Angeke sizikhathaze kakhulu ngalokho kodwa, isimo sezulu angeke sikwazi ukusilawula. Angidlalanga kumdlalo wokuziqeqesha, kodwa (ngiwubukile) ngicabange ukuthi asizinikelanga ngokwanele. Kwisimo esifana nalesi kumele usheshe uhlanganise izinto futhi kumele uthole ukuthi iyiphi i-line ne-length okulungile, ungashaya kanjani kahle kule-wicket nokuthi ikuphi ukushaya okuyingozi.”
“Izolo nanamhlanje sithole siqeqeshe kahle lapho abashayayo bazinikelile. Ngicazwe abaphosayo futhi nendlela abasebenzise ngayo isimo futhi bathola i-swing ebholeni. Izinhlelo zomdlalo abazihlanganisile zikhombisa ukucabanga okuhlukile futhi ngikulindele ukubona ukuthi bazokwenzani kusasa.”
Le-series yemidlalo emithathu iyingxenye ye-ICC Women’s Championship, ukungenela umqhudelwano we-2021 ICC Women’s World Cup futhi u-Van Niekerk ufuna ukungena kahle ngalesikhathi.
“Kubalulekile ukuqala ngokunqoba ngoba kuhlela i-series,” esho eqhubeka. “Ukuzithemba kanye nomdlandla esakwakha kwi-series ne-Bangladesh akumoshekanga. Kubalulekile kithina ukuthola amaphuzu, njalo sikhuluma ngakho, asifuni ukuphinde siye kuma-qualifier futhi lokho kusho ukuthi kuzomele sihlule abahamba phambili futhi siwathole.”
Umdlalo wakusasa uzovezwa ku-SuperSport 2 ngo-12:00 (SAST).
Ukuhamba komdlalo kuzobe kukhona ezinkundleni zokuxhumana ze-Cricket South Africa ku-Facebook (www.facebook.com/cricketsouthafrica) no-Twitter (www.twitter.com/officialcsa).
u-Van Niekerk umangazwe ukuthola umklomelo omkhulu, wathi uyinikela eqenjini lakhe Ama-Proteas Women alindele ithuba lokubhekana ne-England futhi i-CSA imemezela iqembu lama-Proteas Women elizoya e-England Ama-Proteas women athola i-T20 series whitewash u-Luus no-Van Niekerk bahlela ukunqoba i-series kwama-Proteas women Ama-Proteas women aphetha ngokuthola u-5-0 Ama-Proteas Women anqoba emine kwemine Ama-Proteas azimisele ukunqoba i-ODI series e-Kimberley Ama-Proteas women anqobe umdlalo wokuqala bedlala ne-Bangladesh u-Salieg Nackerdien ubekwe njengomqeqeshi obambile wama-Momentum Proteas Ama-Proteas women akulungele ukuhlangana ne-Bangladesh